ဧရာဝတီတိုင်းသူ။တိုင်းသားများအဖွဲ. - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
All Groupsသင်၏အဖွဲ့ များ ဧရာဝတီတိုင်းသူ။တိုင်းသားများအဖွဲ.
နှင်းဆွေဇင်ခိုင် မှ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
Latest Activity: Nov 1, 2012 မျှဝေမယ် Twitter
နှင်းနှင်းတို.ပုသိမ်မှာတော.ရွှေမုဋ္ဌောဘု၇ားရယ်ရေကြည်ဦးဘုရားရယ်ပုသိမ်တံတားရယ်နှီးဘုရားရယ်အများကြီးပဲကွသယ်ရင်းတို.ဆီကအကြောင်းလဲပြောပြကြပါနော်Continue Started by နှင်းဆွေဇင်ခိုင်. Last reply by Thin Thin Aug 22, 2012. ဧရာဝတီတိုင်းသိစရာလေးတွေသိသလောက်ပေါ့
ဧရာဝတီတိုင်းဟာ ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့…Continue Started by ရန်လင်း. Last reply by သူရလွင် Mar 15, 2012. ရိုးသားကျိုးစာဧရာဝတီသား
မဂ်လာပါContinue Started by ဦးမန်းဇေ Feb 24, 2012. အားလုံးကြည်ရန်
You need to beamember of ဧရာဝတီတိုင်းသူ။တိုင်းသားများအဖွဲ. to add comments!
Comment by မြူမင်း on November 1, 2012 at 4:39pm ကျွန်တော်ကတော.ဧ၇ာဝတီတိုင်သာပေါာင်မြိုဈထဲမှာ၇ှိတဲ.၇ွှာလေးတစ်၇ျွှာကမွှေးတာပါ အကောင်.ကတော. youloveme1500.528 ပါ ဧရာဝတီတိုင်ကသူငယ်ချင်းမှားနဲ.ခင်ချင်ပါတယ် Comment by policemen on September 13, 2012 at 8:40pm ကျွန်တော်ကတော့မြောင်းမြ ကံကော်မြိုင် 4လမ်းမှာမွေးတာပါ ဧရာဝတီသားလေးပေါ့
Comment by zin ye htut oo on September 2, 2012 at 4:01pm kyan taw ka lal pathein ka par pal nor de group htay ka lu thay nae khin chin lo. par bya
Comment by ရန်လင်း on August 22, 2012 at 3:40pm အားလုံးကို သူငယ်ချင်းများကိုယ်စား ကြိုဆိုပါတယ် မင်္ဂလာပါ ဗျ Comment by Thin Thin on August 22, 2012 at 2:10pm သင်းကလည်းဧရာဝတီးတိုင်းကပါ
ပန်းတနော်မှာနေပါတယ် Comment by ayoelay on July 24, 2012 at 6:39pm မင်္ဂလာပါဗျာ ဧရာဝတီတိုင်း ကျောင်းကုန်းကပါ
အားလုံးနဲ့ခင်ချင်ပါတယ်ဗျာ :hi Comment by ရန်လင်း on June 4, 2012 at 10:37pm အသက်အကြီးဆုံး ကိုခင်မောင်ဆွေက ဆုံးမရမှာ လောလောဆယ် သူကပျောက်နေတယ် Comment by akungkung007@gmail.com on June 4, 2012 at 8:57pm ဧရာဝတီတိုင်းသားစစ်ပါနော်....ရွှေဒေးသားလေးပါ။အမြင်မတော်တာတွေရင်ဆုံးမပါနော်။ Comment by မင်းမင်း on April 15, 2012 at 9:19am ကွင်းကောက်ကပဲ.......နာနဲ့နီးတာပေါ့?
Comment by တာရာ on April 8, 2012 at 6:17pm မင်္ဂလာပါ တို့ကတော့ ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာတခရိုင် ကွင်းကောက်မြို့ ကပါနော် သူငယ်ချင်းတို့သိမလားမသိဘူး ။မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သူ ကျွန်းပေါ်သားလေးတွေပေါ့။အားလုံးနဲ့ခင်ခွင့်ရချင်ပါတယ်နော်...........။
2. ချစ်၇အောင် (အညာသားလေး)
4. zayyar naing
17. snow myat
လက်ဆောင်ပေးမယ် Alvin Lee
လက်ဆောင်ပေးမယ် aung bah osobedo
လက်ဆောင်ပေးမယ် Aung Lay
လက်ဆောင်ပေးမယ် chan mon
လက်ဆောင်ပေးမယ် emo 555
လက်ဆောင်ပေးမယ် han nyi lwin
လက်ဆောင်ပေးမယ် Hein Htet Aung
လက်ဆောင်ပေးမယ် Hnin Ei Myat
လက်ဆောင်ပေးမယ် ko chit tat